Abasetyhini abaninzi banomthwalo obunzima. Iziphumo ezilungileyo kakhulu zinika ukusetyenziswa kwekhofi yomhlaba. Iingcali zenzululwazi zenze uhlolisiso lwale mveliso kwaye yagqiba ukuba inenelela ekunciphiseni isisindo. Ukongezelela, ayiqukethe nayiphi na idibeneyo, oko kuthetha ukuba ayilimazi umzimba. Phuza le isiselo xa ufuna. Nangona ukusetyenziswa kwayo ixesha elide alichaphazeli impilo yakho. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le mveliso inezinto ezizodwa kwizinto zayo.
Indlela ikhofi inceda ngayo ukulwa nokukhuluphala
Ikhofi eluhlaza iveliswa kwi-arabic eluhlaza. Ngenxa yokuba le siselo iqulethe inani elininzi le-antioxidants, ukusetyenziswa kwayo kunceda ekulahlekeni kwesisindo. Ama-antioxidants anako ukwenza izinto ezinqamlezweni zeeseli, ezahlula. Ukuba uqhathanisa isando esineklasi kunye nekhofi eluhlaza ukuba yeyiphi inceda ekunciphiseni isisindo, impendulo iya kubonakala - ikhofi eluhlaza iphumelela kakhulu ekukhuseleni iikhilogram ezingaphezulu. Iyakwazi ukwahlula ukuya kuma-45% weeseli ezinamafutha, ngelixa ikhefu yeklasi ihlula ngaphezu kwe-14%. Ikhofi eluhlaza ibonisa kwakhona ama-radical e-free of isorganism.
Ikhofi eluhlaza iqukethe inani elikhulu le-chlorogenic okanye i-caffeic acid. Yona inceda ekunciphiseni ivenkile yezilwanyana emzimbeni. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le asidi iguqula i-fatty deposits into energy. Ngoko ke, ukufezekisa umphumo wokufumana ubunzima, ukuphela kokutya ikhofi eluhlaza akukwanele. Kubalulekile ukufumana isicelo samandla, oko kukuthi, ukwenza umzimba. Emva koko iikhilogram ezongezelelweyo ziya kuhamba. Ikhofi eluhlaza ayiluncedo nje kuphela ukulahlekelwa isisindo, kodwa ukulungiselela ukuphucula umgangatho wonke. Ngokomzekelo, i-chlorogenic acid, ene-antioxidant, inceda ukunciphisa ushukela wegazi. Ngoko ke, ikhofi eluhlaza yinconywa kakhulu kubantu abanesifo sikashukela.
Akukho mfihlelo yokuba xa iikhigram zihamba, ulusu luxhomeke. Ukuba ulahlekelwa isisindo ngelixa udla ikhofi eluhlaza, oko akukwenzeka. Iingcali zenzululwazi zibonise ukuba ulusu lwabantu abalahlekelwa isisindo ngoncedo lwekhofi eluhlaza, isikhumba asizange sagxina kuphela, kodwa safumana ukubonakala okuthe xaxa. I-Greencake ifumaneka kwiinguqulelo ezimbini: zinyanyisiwe kwaye zingabisiwe.
Ukufezekisa umphumo omkhulu, kufuneka uphuze ikhofi eluhlaza nsuku zonke. Ikhofi eluhlaza iphucula imetabolism, ngoko inkqubo yokutshisa idiphozithi yeoli ifana nokukhawuleza. Ukongezelela, olu hlobo lwekhofi lucebile kwisixa esikhulu samavithamini kunye namaminerali.
Esi siselo sinconywa ngabo bafumana uxinzelelo lwegazi eliphezulu. Ngokusetyenziswa rhoqo kohlaza, umngcipheko wezifo ezinxulumene nesimo senhliziyo ixutyushwa. Ukubunjwa kwekhofi kubandakanya into eyenza ukuhlanjululwa kwemithambo yegazi kwi-cholesterol plaques, izinga le-cholesterol liqhelekileyo, oko kuthetha ukuba umngcipheko wesifo kunye nezifo ezifanayo ziyahla.
Ngenxa yeziphumo ezininzi, izazinzulu ziye zafikelela kwisigqibo sokuba abo baphuza ikhofi eluhlaza, banciphise ukutya, oko kuthetha ukuba kubaluleke kakhulu ukulwa neekhilogram ezingaphezulu.
Ukusetyenziswa rhoqo kwesi siselo kuphucula umsebenzi wengqondo, ngoko kunceda abo bafundayo, umzekelo, kubafundi. Ukongezelela, izinto ezisekhofu zikunceda ukucoca isibindi seesxibisi, i-toxins, i-cholesterol nezinye izinto eziyingozi. Le khofi iqulethe into efana ne-caffeine, ngoko ikhofi ibizwa ngokuba isiselo esiqabulayo, ngokuqhelekileyo sinxila ekuseni ukunyamezela. I-caffeine inceda ukwandisa amandla omzimba, ukusela ikhofi, umntu ufumanisa i-vivacity yonke imini.
Indlela yokusebenzisa ikhofi eluhlaza ukuze ulahlekelwe isisindo
Ukuba usela ikhofi eluhlaza kwenyanga, unako ukuhlula ezimbini okanye ezintathu kilogram. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba umntu akufanele athembele kuphela ekusebenzeni kwekhofi. Kufuneka ukuba udle ngokufanelekileyo, kodwa akudingeki ukuba udle kakhulu kwaye kuya kuba luncedo ukukhupha ukutya okuphezulu kwekhalori ekudleni.
Ikhofi kufuneka inxiliswe emini, kodwa ingabi ngaphezu kweethathu iikomityi. Sebenzisa kangcono ngaphambi kokutya, kuba kunciphisa ukutya, kwaye ngoko isabelo apho umzimba uya kuzaliswa khona, siya kuncipha. Kufuneka ukhunjulwe ukuba ikhofi iyisiselo esiphuthumayo kwaye kungcono ukuba ungayiphuzi ngokuhlwa, mhlawumbi umntu angalala. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kufuneka uphuze ikhofi eluhlaza ngaphandle kokungena nayiphi na into, ngaphandle koko ayiyi kuba nempembelelo. Ngomso, kucetyiswa ukuba uphuze ikhofi ngokwe-cwangciso elandelayo: isidlo sasekuseni, kwaye emva kwemizuzu engama-45 ikhobe yekhofi, ngoko umzimba uya kufumana umthwalo omkhulu wamandla.
Ungaphuzi ikhofi eluhlaza kunye neesekese okanye ezinye iesekese, kuba zi-caloric kakhulu. Ukuba ufuna ngokwenene isiphuzo esiphuzo, unako ukongeza ubusi.
Ikhofi eluhlaza ingasetyenziselwa ngokuqhelekileyo bonke, ngaphandle kwalabo bafumana ingcinezelo yomshukela.
Oku, mhlawumbi, ngenye yezona zixhobo ezinokubaluleka kunye nezifanelekileyo ezikunceda ukulahla ubunzima obukhulu.
Imveliso ephucula umbono
Iimpazamo kwisondlo kunye nento abasongelayo
Iipropati ezisebenzayo zeentlanzi ze-pikeperch
Dill, parsley, cilantro: izakhiwo ezincedo
Ukunyanga okuqhubekayo kwe-sinusitis kunye ne-sinusitis
I-carily e-caramel ekhilimu ene-grill
Ubungqina bokunyaniseka kwamadoda
I-Klafuti ukusuka kwi-shrimps
Ubomi bomntu kaNastya Zadorozhnaya
Indlela umdaniso wesibeleko uthinta ngayo i-chakra yesondo
Indlela yokukhetha izimonyo ezifanelekileyo ebusweni ngesikhumba esibuhlungu?
Izenzo zabantu ezicaphukisa abafazi
I-Horoscope yabesifazane beCapricorn ngoMeyi 2017
Umtshato apho indoda iselula kunowesifazane
Iingoma zezingane ezivela kwi-0 ukuya kwe-3 ubudala
Shake imisipha okanye utshise amafutha?